ဘရာဇီး CSGO အသငျးကို ချေါယူလိုကျတဲ့ အငျဒိုနီးရှား အသငျး BOOM Esports – Gaming Noodle
ဘရာဇီး CSGO အသငျးကို ချေါယူလိုကျတဲ့ အငျဒိုနီးရှား အသငျး BOOM Esports
အငျဒိုနီးရှား Esports အဖှဲ့အစညျးကွီးတဈခုဖွဈတဲ့ BOOM ဟာ ဘရာဇီးအသငျး INTZ ရဲ့ CS: GO ကစားသမားဟောငျးမြားကို ချေါယူလိုကျပါတယျ။ BOOM ဟာ ဒီအကွောငျးကို မကွာသေးမီကမှ ကွညောလိုကျတာဖွဈပွီး လာမယျ့မတျလအတှငျးမှာ ကငျြးပမယျ့ ESL Pro League Season 11 အတှကျ ပွငျဆငျမှုတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
ယငျးကစားသမားမြားဟာ ယခငျထဲက BOOM နဲ့ ဆကျနှယျမှုမြားစှာ ရှိနခေဲ့ကွတာပါ။ yeL နဲ့ တကှသော INTZ အသငျးသားဟောငျးမြားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ကငျြးပခဲ့တဲ့ ESEA MDL မှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့အတှကျ ယခုလို BOOM အသငျးရဲ့ ကစားသမားသဈမြားအနနေဲ့ ESL Pro League 11 ကို ဝငျရောကျခှငျ့ ရရှိတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
BOOM Esports CSGO
BOOM အသငျးရဲ့ လကျရှိကစားသမားမြားကတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈကွပါတယျ။
Alessandro “Apoka” Marcucci (နညျးပွ)
BOOM အသငျးရဲ့ ငါးယောကျမွောကျကစားသမား felps ဟာ MIBR အသငျးသားဟောငျးတဈဦးပါ။ သူဟာ CS: GO လောကမှာ အတှအေ့ကွုံမြားပွားသူဖွဈသလို Luminosity Gaming နဲ့ Team oNe တို့မှာ အဌားကစားသမားအနနေဲ့ ဝငျရောကျနခေဲ့သူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ Team oNe နဲ့ နောကျဆုံးခြုပျဆိုထားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အဌားကစားသမားစာခြုပျကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလအကုနျမှာ သကျတမျးပွညျ့ခဲ့ပါတယျ။
BOOM ကစားသမားသဈမြားဟာ INTZ အသငျးသားမြားအဖွဈ တဈနှဈကြျော ကစားနခေဲ့ကွတာပါ။ ယငျးကာလအတှငျးမှာ သူတို့အတှကျ အောငျမွငျမှု မြားမြားစားစား မရရှိခဲ့ကွပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ကငျြးပခဲ့တဲ့ StarLadder Berlin Major ကိုတော့ ဝငျရောကျခှငျ့ရအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး INTZ ရဲ့ ပထမဆုံး CS: GO Major အဖွဈ မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
This is it. The announcement you've been waiting for. Please welcome our newest division, all the way from Brazil, BOOM…
Posted by BOOM Esports on Monday, 24 February 2020
BOOM အသငျးသဈ ပထမဆုံးယှဉျပွိုငျရမှာကတော့ မတျလ ၃ ရကျနမှေ့ာ စတငျမယျ့ ESL One Rio Major Americas Minor South America closed qualifier ပှဲစဉျမြားပဲဖွဈပါတယျ။ BOOM ဟာ နာမညျကွီး Esports အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈသလို ယခုချေါယူလိုကျတဲ့အသငျးသားသဈမြားဟာလညျး ဝါရငျ့ကစားသမားဖွဈကွတာမို့ ပရိသတျမြား စောငျ့ကွညျ့နိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
ဘရာဇီး CSGO အသင်းကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အသင်း BOOM Esports
အင်ဒိုနီးရှား Esports အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BOOM ဟာ ဘရာဇီးအသင်း INTZ ရဲ့ CS: GO ကစားသမားဟောင်းများကို ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ BOOM ဟာ ဒီအကြောင်းကို မကြာသေးမီကမှ ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီး လာမယ့်မတ်လအတွင်းမှာ ကျင်းပမယ့် ESL Pro League Season 11 အတွက် ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းကစားသမားများဟာ ယခင်ထဲက BOOM နဲ့ ဆက်နွယ်မှုများစွာ ရှိနေခဲ့ကြတာပါ။ yeL နဲ့ တကွသော INTZ အသင်းသားဟောင်းများဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ESEA MDL မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက် ယခုလို BOOM အသင်းရဲ့ ကစားသမားသစ်များအနေနဲ့ ESL Pro League 11 ကို ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
BOOM အသင်းရဲ့ လက်ရှိကစားသမားများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။
Alessandro “Apoka” Marcucci (နည်းပြ)
BOOM အသင်းရဲ့ ငါးယောက်မြောက်ကစားသမား felps ဟာ MIBR အသင်းသားဟောင်းတစ်ဦးပါ။ သူဟာ CS: GO လောကမှာ အတွေ့အကြုံများပြားသူဖြစ်သလို Luminosity Gaming နဲ့ Team oNe တို့မှာ အဌားကစားသမားအနေနဲ့ ဝင်ရောက်နေခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Team oNe နဲ့ နောက်ဆုံးချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အဌားကစားသမားစာချုပ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလအကုန်မှာ သက်တမ်းပြည့်ခဲ့ပါတယ်။
BOOM ကစားသမားသစ်များဟာ INTZ အသင်းသားများအဖြစ် တစ်နှစ်ကျော် ကစားနေခဲ့ကြတာပါ။ ယင်းကာလအတွင်းမှာ သူတို့အတွက် အောင်မြင်မှု များများစားစား မရရှိခဲ့ကြပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ StarLadder Berlin Major ကိုတော့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး INTZ ရဲ့ ပထမဆုံး CS: GO Major အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
BOOM အသင်းသစ် ပထမဆုံးယှဉ်ပြိုင်ရမှာကတော့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ စတင်မယ့် ESL One Rio Major Americas Minor South America closed qualifier ပွဲစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ BOOM ဟာ နာမည်ကြီး Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သလို ယခုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အသင်းသားသစ်များဟာလည်း ဝါရင့်ကစားသမားဖြစ်ကြတာမို့ ပရိသတ်များ စောင့်ကြည့်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။